मुस्ताङको बाढीमा खोप तार्ने स्वास्थ्यकर्मीको डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकद्वारा प्रशंसा - Kantipath.com
मुस्ताङको बाढीमा खोप तार्ने स्वास्थ्यकर्मीको डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकद्वारा प्रशंसा
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसले मुस्ताङमा स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाविरुद्धको खोप खोला तारिरहेको भिडिओ ट्विट गर्दै प्रशंसा गरेका छन्। असार १ गते मुस्ताङको छापताङ् खोला बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीले पाइपको सहारले ‘भ्याक्सिन क्यारिअर’ तारेका थिए। सामाजिक संजालमा भाइरल भएको उक्त भिडिओलाई महानिर्देशक टेड्रोसले ट्विट गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले यो साहसका साथ जीवनरक्षाका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्।
तर कतिपय स्थानमा यी नायकहरुले अझै खोप लगाउन नपाएको उनको गुनासो छ। उनीहरुले खोप पाएको छैनन्, के यो जायज छ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले उनीहरुलाई खोप तत्काल लगाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। असार १ गते कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने थियो। स्वास्थ्यकर्मीले मुस्ताङको कोबाङ र टुकुचेमा जेष्ठ नागरिकलाई बोलाइसकेका थिए।
कोबाङ कालीगन्डकीको किनारमा रहेको गाउँ हो। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा खोपको प्रतीक्षामा थिए। खोलामा बाढी आएर खोप ल्याउन नसकिने भयो। त्यो दिन छापताङ् खोलाले रुप फेर्‍यो। उर्लेर आएको छापताङ् खोला तर्न सकिने अवस्था थिएन।
खोप लेतेस्थित कोल्डस्टोरमा राखिएको थियो। त्यहाँबाट थासाङ गाउँपालिकाको गाडीमा खोप लिएर गएका चालकले गाडी तार्ने प्रयास गरे। तर सफल भएनन्। छापताङ् खोलामा अहिले पुल बन्दै छ। पुल बनिरहेको स्थानबाट उनीहरुले एउटा पाइप तेर्स्याए र त्यसैमा झुण्ड्याएर खोप तारे।
Previous Previous post: डाक्टरी पेसा छाडेर पोर्न स्टार !
Next Next post: टिपरको ठक्करबाट सञ्चारकर्मीको मृत्यु